FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChiyao IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Kukho uluvo oluxhaphakileyo oluthi kuthatha iintsuku eziyi-21 ukuqhela umkhwa omtsha. Kodwa uphando lona lubonisa ukuba abanye bathatha ixesha elingakumbi kunabanye ukuze kubekho utshintsho olubonakalayo. Ngaba oku kumele kukutyhafise?
Khawucinge ngoku: Zithelekelele ufuna ukujima kathathu ngeveki.
Kwiveki yokuqala ujima kathathu nyhani.
Kweyesibini, awujimi usuku olunye.
Kweyesithathu uphinda ujime kathathu.
Kweyesine kunzima nokujima usuku olunye nje.
Kweyesihlanu ujiima kathathu, yaye ngoku wenza njalo oko.
Kuthathe iiveki ezintlanu ukuze uqhele. Ungacinga ukuba lixesha elide elo kodwa xa uthe wakwenza kakuhle, kuya kukuvuyisa ukuba nomkhwa olungileyo omtsha.
UMGAQO WEBHAYIBHILE: “Ilungisa lisenokuwa kasixhenxe, yaye ngokuqinisekileyo liya kuvuka.”—IMizekeliso 24:16.
IBhayibhile iyasikhuthaza ukuba singancami. Ekugqibeleni, asikokuba asiphumelelanga kangaphi okubalulekileyo kodwa kukuba siphinde sazama kangaphi.
Ekugqibeleni, asikokuba asiphumelelanga kangaphi okubalulekileyo kodwa kukuba siphinde sazama kangaphi
Sukucinga ukuba woyisakele ngenxa yokuba kumane kusibakho amagingxigingxi. Lindela ukuba aza kumane esibakho njengoko uzama ukufikelela usukelo lwakho.
Cinga ngamaxesha oye wenza kakuhle ngawo. Ngokomzekelo, ukuba uzama ukuphucula indlela othetha ngayo nabantwana bakho, zibuze: ‘Bekunini kanene ndifuna ukungxolisa abantwana bam, kodwa andakwenza oko? Ndiye ndenza ntoni? Ndinokuyiphinda njani loo nto?’ Imibuzo efana naleyo ingakunceda uphinde uphumelele kunokuba uhlale ucinga ngamaxesha ongenzanga kakuhle ngawo.
Ngaba ungathanda ukwazi indlela imigaqo eseBhayibhileni engakunceda ngayo ebomini bakho, njengendlela yokujamelana namaxhala, ukuba nentsapho eyonwabileyo nokufumana ulonwabo lokwenene? Thetha neNgqina likaYehova okanye uye kwiwebhsayithi yethu u-jw.org/xh.
“Amehlo akho aqaqambileyo afanele athi ntsho phambi kwakho.”—IMizekeliso 4:25.
“Ndiyazilibala izinto ezingasemva ndize ndolulele kwizinto ezingaphambili, ndisukela umvuzo.”—Filipi 3:13, 14.